आफैंले बनाएको प्रावधानविपरीत ओलीले बनाए प्यानल! :: सन्जिब बगाले :: Setopati
आफैंले बनाएको प्रावधानविपरीत ओलीले बनाए प्यानल!
राजेश घिमिरे चितवन, मंसिर १३
एमालेको दसौं महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको निर्वाचन हल। तस्बिर: रासस
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दुई समूहले प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिँदा तलदेखि माथिसम्म विभाजित भएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै चाहनाअनुरूप यसपालि प्यानल बनाउन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो।
यो प्रावधानलाई उनीसँग फरक मत राख्नेहरूले समेत स्वीकारेका थिए। उनीहरू पनि पार्टीको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म प्यानल बनाउन नहुने पक्षमा थिए।
तर आफैंले बनाएको प्रावधानविपरीत ओलीले घुमाउरो ढंगले प्यानल बनाएको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए।
उनका अनुसार सहमतिका लागि भनेर अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेर महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गर्नु भनेको पनि एक किसिमले प्यानल नै हो।
ओलीले आफूले बनाएको सूचीविरूद्ध कसैलाई उम्मेदवारी नदिन आग्रह गरेका थिए। आइतबार मध्यरात सूची पढेर सुनाउँदा उनले कसैलाई चित्त नबुझे उम्मेदवारी दिन पाउने भनेका थिए। सँगसँगै यो पनि भने, 'सकेसम्म उम्मेदवारी नदिऊँ। दिएमा खाना-बस्नको व्यवस्था गर्न कठिन छ।'
'पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि कसरी उम्मेदवारी दिन सकिन्छ? पार्टीमा कोही सर्वेसर्वा भएपछि उसबाट कहाँनिर धोका हुने हो भन्ने डर लाग्ने रहेछ,' ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने, 'ओलीको सरकारी टिममा नपरेपछि गैरसरकारी ढंगले निर्वाचन लड्ने आँट आएन। चुनाव भए पनि उहाँले इसारा गरेका व्यक्तिबाहेकले जित्न कठिन छ।'
निर्वाचन भए पनि महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस भएका नामलाई नै प्रतिनिधिहरूले मत दिने उनको दाबी छ।
ओलीले सूचीमा घोषणा गरेकामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केही केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले नरूचाएको मान्छे आउन कठिन हुने एक निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'सुरूमै निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा गएको भए धेरैको उम्मेदवारी पर्थ्यो तर उहाँले निर्वाचन नगरी आफ्नै तजबिजमा मनोनयन गर्ने अधिकार लिनुभयो,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'पहिले उहाँ नै पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि चुनाव आवश्यक छ भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले ती सबै अधिकार खोसिएका छन्।'
एमालेमा बहुपदको अवधारणा ल्याउने ओली नै हुन्। तर उनी आफैंले ती पदमा प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोक्ने कोशिस गरेका छन्। यसो हेर्दा रोकेजस्तो देखिँदैन तर अधिकांश प्रतिनिधि ओलीको घोषणाविपरीत उम्मेदवारी दिन डराए।
'सहमतिका लागि भनेर उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा कमिटी प्रस्ताव गर्नुभयो। चित्त नबुझेमा चुनाव लड्नसमेत भन्नुभयो,' अर्का एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने, 'पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्षले बनाएको टिमसँग चित्त नबुझेर कसले निर्वाचन लड्ने आँट गर्छ? त्यसैले शब्द प्रयोग नगरे पनि यसरी घोषणा गर्नु भनेको प्यानल बनाएकै हो।'
महाधिवेशन स्थल वरिपरि घुमेका प्रतिनिधिहरूको मनस्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ।
उनीहरूले ओलीको प्यानल राम्रैसँग चिनेका छन्। ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै अध्यक्षमा उठेका भीम रावल ओलीको प्यानलमा हुने कुरै भएन। उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका घनश्याम भुसाल, सचिवका उम्मेदवारहरू भीम आचार्य र टंक कार्की पनि ओली प्यानलका होइनन् भनेर सबैले बुझेका छन्।
ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू नै ओली प्यानलका हुन् भन्ने 'ओपन सेक्रेट' जस्तै छ।
उपाध्यक्षमा ओलीले रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रस्ताव गरेका छन्। उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार घनश्याम भुसाल भने ओलीले पदाधिकारीमा राख्न नचाहेका व्यक्ति हुन्।
त्यस्तै, सचिवका उम्मेदवारहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र पद्मा अर्याल पनि ओलीले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति हुन्। ओलीको प्रस्तावलाई चुनौती दिँदै टंक कार्की र भीम आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन्।
केही केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचन हुँदैछ। केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेहरू ओलीसँग फरक मत राख्नेहरू हुन्।ओलीसँग पूर्ण रूपमा सहमतहरूले भने चित्त नबुझे पनि उम्मेदवार बन्ने आँट गरेका छैनन्।
सचिवका लागि शेरधन राई, खगराज अधिकारी, शिवमाया तुम्बाहाङफे, कर्णबहादुर थापा लगायत नेताहरूले दाबी गरेका थिए। निर्वाचन भए उम्मेदवारी दिने घोषणासमेत गरेका थिए। तर उनीहरू ओलीले गरेको प्रस्तावबाट बाहिर जान सकेनन्। अर्थात् ओलीको प्यानलसँग डराए।
उपमहासचिवमा आफ्नो दाबी कायमै रहेको पटक-पटक दाबी गरेकी वृन्दा पाण्डेले पनि महिलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा चित्त बुझाएकी छन्।
त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरेका सुवास नेम्वाङले उपाध्यक्षमा चित्त बुझाएका छन्। उनले निर्वाचन लड्ने साहस देखाउन सकेनन्।
'विभिन्न पदमा दाबी राख्नेहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको भन्दा ओलीको भर गरे। उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउँछन् भनेर सोच्नै सकेनन्। एक प्रतिनिधिले भने, 'त्यसकै परिणाम हो, ओलीको प्यानलसँग लड्न डराएको।'
आफूले आफैंलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्नु अनौठो भएको अर्का एक प्रतिनिधिको आरोप छ।
'सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्छु भन्ने हो भने आफूले अध्यक्षको दाबी छाड्नुपर्थ्यो वा अर्कैलाई जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो तर प्रतिनिधिहरूले हुटिङ गरेर साथ दिन्छन् भन्ने मानसिकताले गर्दा आफ्नो नाम आफैंले प्रस्ताव गर्नुभयो,' ती प्रतिनिधिले भने, 'हरेक कुरालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति उहाँमा बढ्दै गएको छ। आफूले प्यानल बनाएर अरूलाई बनाउन पाइँदैन भन्ने अनि निर्वाचनबाट समेत वञ्चित गराउन खोज्ने उहाँको सोच रहेछ।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १३, २०७८, ११:४१:००